गैर-सरकारी दान कोष Chulpan Khamatova र Dina Korzun "जीवन दिनुहोस्" 2007 मा देखियो। जसले, लामो छोराछोरीलाई मदत एक कोष सिर्जना अघि स्वयंसेवकहरु आफ्नो गम्भीर रोग सामना रूपमा मान्छे को एक सम्बद्धता छ। त्यसपछि दान यसलाई अब ताकि व्यापक अझै थियो। दुर्भाग्यवश, धेरै मान्छे अरू कसैको misfortune मा आँखा खोल्न प्रयोग गरिन्छ। "बच्चाहरु - जीवन को फूल, र तिनीहरूले मदत गर्न सक्छ" - दृढ अभिनेत्री थाहा Dina Korzun र Chulpan Khamatova।
परोपकारी फाउंडेशन "दिनुहोस् जीवन" रूसी क्षेत्रहरु मा कुनै शाखा र प्रतिनिधि कार्यालय छ। यो पहल समूह -volonterov स्वयंसेवकहरु र दाताहरुलाई, क्यान्सर र हिमेटोलोजिकल रोगहरु संग बच्चाहरु सहायता प्रदान धेरै वर्ष को लागि गरिएको छ।
बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका मा - साथै, "दिनुहोस् जीवन" देश बाहिर दुई साझेदार धन छ।
एक कोष को स्थापना
2005 मा, अभिनेत्री Chulpan Khamatova, को बाल ओन्कोलोजी र हेमाटोलजी मास्को को कुराकानी भने अस्पताल थिए के एक दु: खी अवस्थामा देखे। डाक्टर उसलाई आगम जो महंगा चिकित्सा उपकरण जान थिए एक दान कन्सर्ट, पकड गर्न आग्रह गरे। Dina Korzun संग Teaming, Chulpan दुई दान संगीत आयोजित। दोस्रो कन्सर्ट गर्ने थिएटर "समकालीन" मा आयोजित, र यो निमन्त्रणा प्रसिद्ध संगीतकार र कलाकार संलग्न थिए भएको थियो। यो कन्सर्ट Chulpan Khamatova बिरामी बच्चाहरु को उपचार को लागि सङ्कलन 300 हजार डलर मदत गरे। निम्न वर्ष, इस्पात Dina Korzun र Chulpan Khamatova द्वारा आयोजित अर्को दान कन्सर्ट भएको थियो। यो कोष "जीवन दिनुहोस्" चाँडै पछि संगठित भएको थियो। र अब संगीत भनिन्छ मास्को मा सालाना आयोजित सबैभन्दा प्रतिभाशाली पप तारा एक किसिम को सहभागिता संग "जीवन दिनुहोस्" छन्।
जो कोहीले मदत गर्न सक्छ
अभिनेत्री निश्चित छ: बिरामी बच्चाहरु र सबैलाई सक्छन् मदत गर्न! यसो गर्न, तपाईं आवश्यक पैसा धेरै छ गर्छन्। उदाहरणका लागि, यो नियमित रगत दान गर्न सम्भव छ, र तपाईं, बच्चाहरु खेल्न अस्पताल आउन तिनीहरूलाई समर्थन को पत्र लेख्ने र कुरियर रूपमा आमाबाबुले मदत गर्न मद्दत गर्न एक स्वयंसेवक बन्न सक्नुहुन्छ ... त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् - यो इच्छा थियो।
यो परिवर्तन गर्न बिरामी बच्चाहरु र आफ्नो समस्याहरू दैनिक सामना असम्भव छ। यो जीवन साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ, र हामी बेवास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। "म भेट गरेका निःस्वार्थ, अति दयालु मान्छे खुसी छु - स्वयंसेवकहरु", - Chulpan Khamatova भन्छन्।
परोपकारी फाउंडेशन बारेमा दस वर्षसम्म अस्तित्व मा भएको र समय विरामीहरु आफूलाई भर आफ्नो न्यानो वातावरण कायम छ। आखिर, पनि बिरामी छोराछोरी, वास्तवमा, एउटै बच्चाहरु छन्! तिनीहरूले रंग, केही प्रगति, खेल्छन्। जब बच्चाहरु ठीक, यो पनि ठूलो आनन्द दिन्छ। तिनीहरूले विद्यार्थीहरूको सफलता सिक्दै, यो तर आनन्दित सक्दैन। केही बच्चाहरु बढन, बरामद गरेको छ, स्वयंसेवकहरु अन्य बच्चाहरु गर्न रोग सामना गर्न मदत, बारी मा, काम गर्न अस्पताल आउँछन्।
2008 मा, मास्को छोराछोरीको ओन्कोलजी केन्द्र, हेमाटोलजी र इम्मुनोलोगि मा निर्मित रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन Chulpan Khamatova कोष को सहयोग को लागि धन्यवाद। दिमित्री Rogachev - केन्द्र विरामीहरु फाउंडेशन को एक नाम थियो। क्यान्सर रोगी केटा प्यानकेकहरू संग चिया गर्न रूसी राष्ट्रपति निमन्त्रणा। र कोष इच्छा केटा पूरा गर्न सक्षम थियो! कारण यस अवसरमा गर्न, म एक बच्चाको धर्मशाला निर्माण गर्न व्यवस्थित। दुर्भाग्यवश, केटा अब जीवित छ। Dima Rogachev सेप्टेम्बर 2007 मा फोक्सोमा मा आक्रान्त इस्राएललाई मृत्यु भयो।
काम फंड को क्षेत्रहरु
जग Chulpan Khamatova र Dina Korzun निर्देशनहरू को एक किसिम मा काम गरिरहेको छ। तिनीहरूमध्ये:
विशिष्ट विरामीहरु लागि धन को संग्रह।
मास्को मा अस्थायी आवास, विरामीहरु र आफ्नो नातेदार आगन्तुकहरूलाई।
विरामीहरु समर्थन गर्न अस्पताल को स्वयंसेवक आन्दोलन संगठन।
विदेश विरामीहरु प्रदान गर्ने।
रगत दान को संगठन।
सबै भन्दा राम्रो औषधि पनि मास्को क्लिनिक लागि खरिद।
आधुनिक उपकरण खरिद।
विदेश औषधि रूस मा दर्ता देखि कुरियर द्वारा आधिकारिक वितरण।
को कोष "वेरा" बचत पसल साथ सँगै सिर्जना।
रूसी क्षेत्रहरु लागि प्रशिक्षण सेमिनार।
मा मास्को अस्पताल मरम्मत।
मनोवैज्ञानिक सहायता र अन्य।
पहिले र उपचार पछि छोराछोरीलाई लागि समर्थन
जग Chulpan Khamatova पनि अघि र उपचार पछि दुवै बच्चाहरु मद्दत गर्छ। मास्को को सबै भन्दा राम्रो सांस्कृतिक ठाउँहरू, रेखाचित्र बच्चाहरु को एक प्रदर्शनी - विरामीहरु फंड। हरेक वर्ष, 2010 देखि, जग निको बच्चाहरु को लागि खेल संगठित गरे। पनि Chulpan Khamatova मदत र Dina Korzun फंड छोराछोरीको उपचार गर्न योगदान सबै रुचि बाहिर परोपकारी गतिविधिहरु पूरा हरेक सहायता प्रदान गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको: सूची र मुख्य विशेषताहरु
वैश्वीकरण को विफलता।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ): नियमहरु, उद्देश्य, नियम, सिफारिसहरू
गति के छ। संक्षिप्त गूढ रहस्य
एससीओ र BRICS: ट्रान्सक्रिप्ट। एससीओ र BRICS को सूची
मध्यम बाल बब लागि सबैभन्दा सुशील Hairstyles
गैर-बुना समर्थन मा vinyl वालपेपर: ग्राहक समीक्षा
Ostankino को टावर। Ostankino को टवर: अवलोकन डेक। टिभि टवर ओस्टिनोइन
मासु, ओवन मा सुखा
काम र मानव कारक
कसरी चिकन Bake गर्न
, यांत्रिक इलेक्ट्रनिक र वायरलेस कल
खतरनाक भोल्टेज। मानव जीवन खतरनाक मानिन्छ भोल्टेज के हो?